I-Badan - izakhiwo zokwelapha nokuphikisana
Ubuhle nempilo Ibhange le-Piggy labantu abapheka
E-Altai, njengesiphuzo se-tonic ngokuvamile sisebenzisa i-saxifrage noma ubhanana. Ngakho-ke, lesi sitshalo sibizwa nangokuthi i-Mongolian, i-Chigir neTyria. Imithi yendabuko kanye nabahlengikazi bendabuko futhi bahlola ngokucophelela i-badan - izakhiwo zokwelapha kanye nokuphikisana, ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nemiphumela ukuthi izidakamizwa ezivela kule mithi zikhiqiza emzimbeni womuntu.
Izinto ezibalulekile zokwenza imithi yizona zonke izingxenye zesitshalo: izimpande, iziqu, izimbali, amaqabunga nembewu.
Izakhiwo zokwelapha zomsuka we-badan no-contraindications
Inani eliyinhloko yi-rhizomes ye-saxifrage, ngoba iqukethe inani eliphezulu lemishini ewusizo. Ukwakhiwa kwamakhemikhali okuyingxenye ebhekwayo ye-bahada kuhlanganisa izinto ezinjalo:
Izingxenye ezifakwe kuhlu zibuye zithole izindawo zokuphulukisa ezimpandeni ze-badan nokuphikisana.
Izenzo ezithandekayo ezinikezwa nge-saxifrage:
Futhi, izimpande ze-badana zinomthelela omuhle esimweni sezindonga zamasongo, ziqinise, zibenze ziqine futhi zithande kakhulu.
Izinkomba zokungena kwezimpawu ezichazwe:
i-coagulability eyengeziwe yegazi ;
Izakhiwo eziwusizo zamaqabunga neziqu ze-badan nokuphikisana
Izingxenye ze-saxifrage ziqukethe izingxenye ezifanayo eziyigugu njengezimpande, kodwa emgodini ophansi. Omdala isitshalo, ngaphansi kwamaqabunga neziqu, futhi ngaphezulu kuma-rhizomes emifino yezinto eziphilayo ezisebenzayo.
Izakhiwo zokuphulukisa zeqabunga le-badan nokuphikisana nokusetshenziswa kwayo kusekelwe kokuqukethwe okwengeziwe:
i-pyrocaetin ne-tannides e-pyrogallic;
i-ellagiki ne-gallic acid;
Ukuhlanganiswa kwesithako sokugcina okukhulunywa ngaso kufinyelela ku-22%, okwenza ukuba umthombo ocebile kakhulu we-arbutin emvelo.
ukubuyisela (isistimu yezinzwa);
i-disinfectant (ye-urinary tract);
Ukungafani nokusetshenziswa kwamaqabunga e-badana yizimo ezifanayo nakwezinkinga ze-rhizomes - ukucindezelwa kwegazi okuphansi, ukucindezeleka kwegazi, ukuphakama kwamandla egazi, ukuqina komzimba kanye nokuhlushwa kwe-thrombosis.
Izakhiwo zokwelashwa nokuphikisana kwemibono yomuthi we-bald obukhulu
Imbewu kanye ne-inflorescences yesitshalo esichazwe ngokuvamile isetshenziselwa ukulungiswa kwemithi yangaphandle ngendlela ye-lotions, i-rubs kanye ne-compress.
Lezi zingxenye ze-saxifrage zicebile kulezi zakhi ezisebenzayo njengamaqabunga. Ngokwandisa ukuhlushwa kwabo ngenkathi yokuvuthwa, banezakhiwo ezengeziwe ezisebenzayo:
Ukunqunywa kwemifino kanye nokuhlobisa izimbali kanye nembewu ye-saxifrage kujwayelekile ukwenza okuqukethwe kwamanoni esikhumba, kusize ukuqeda ama- acne , ama-pores amancane.
Njengoba kunikezwe indlela yangaphandle yokusebenzisa izingxenye zotshani obhekene naso, azikho ukuphikisana kwazo. Uma ungeza imbewu nemibala ye-badana itiye, kufanele uqaphele uhlu lwamatholo lapho ungakwazi khona ukuthatha imithi ezimpandeni namaqabunga e-saxifrage.
Marigolds - izakhiwo zokwelapha
Ukulala-isithombo - izindawo zokwelapha kanye zokupheka
I-Arrhythmia yenhliziyo - ukwelashwa ngamakhambi abantu
Ukwelashwa kwamalungu e-burdock
Ukwehliswa kwe-Chamomile - okuhle nokubi
Indlela yokuqinisa imisipha yenhliziyo ekhaya?
I-Pomelo - izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
Buds ivy - impahla zokwelapha
Amaqabunga okusajingijolo - izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana
Amakhambi omphakathi wegazi eliphezulu
Izimpande ze-sunflower - izakhi zokwelapha
Ulwazi mayelana nomshado oyimfihlo kaKylie Minogue noJoshua Sassa kwakuyi "dada"
Ukwehla kokulahlekelwa isisindo Umlilo Fit
Yini okufanele ugqoke i-skirt-bell?
U-Kylie Jenner esitokisini
Izinhlobo ze-honeysuckle ezidliwayo
I-Quesadilla - iresiphi
I-Prince George ibeke ukulinganisa kwezingane ezinomusa kakhulu
I-Ludza - ezikhangayo
Ungasula kanjani ukuguqulwa?
Ukuhamba emhlabeni jikelele nge $ 8 ngosuku? Funda ukuthi lokhu kungenzeka kanjani
U-Kate Middleton ukhulelwe ingane yesithathu?
I-manicure yasehlobo yase-2018 - izitayela zemfashini, amashaveli, imibono ye-nail design
Ziyini izicathulo kwi-sole itrektri ebizwa ngokuthi?
I-Niche emdongeni we-plasterboard
I-Linen Dresses 2013
Iwayini kusuka ku-dandelions - iresiphi